अब त आत्मनिर्भरताको पाठलाई पनि पढौँ न ! – Chitwan Post
नीति तथा कार्यक्रमका कुरा
सरकारद्वारा सुन्दर नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्ने भनियो । सञ्चार माध्यमले पनि प्राथमिकताका साथ लाइभ टेलिकास्ट गरेर सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराए । राष्ट्रपतिका अघि–पछि कारदेखि बाइकको लाममा सुरक्षाकर्मीको कडा पहरा पनि देखिन्थ्यो । बाटोमा सायद लकडाउनका कारण ट्राफिक जाम पनि त थिएन । यो दृश्यलाई नियाल्दा तामझाम बडो सानदार राजा–महाराजाकै जस्तो देखिन्थ्यो । सञ्चार माध्यमले क्षण–क्षणका समाचारमा अद्यावधिक गर्न हतारो गरेको पनि उत्तिकै देखिन्थ्यो ।
त्यसै क्रममा आयो ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ’ । अनि विपक्षी दलको विरोधको रोइलो सुरु भयो । सत्तारुढ दलले वाह ! वाह ! भन्दै गर्दा विपक्षीले सत्ताबाहिर हुनुको धर्म निभाउने शैली त पोहोर पनि देखिएकै हो । यसपालि पनि उसै गरी दोहोरियो । अब एक–दुई हप्तासम्म विज्ञहरूले घतलाग्दा शब्द र तर्क बोकेर टिप्पणी गर्नेछन् । अनि मलाई याद छ– गाउँका जनता बिचरा उस्तै छाप्रोमा बसेकाहरू उही पुरानो कुवाको पानी भर्न भन्दै त्यही कुच्चिएको हलुङ्गेको गाग्री बोकेर उसै गरी धाइरहन्छन् । तिनको जीवनशैलीलाई यी राम्रा र मीठा शब्दले नबदलेसम्म तिनका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात । गतसाल पनि ठ्याक्कै यस्तै चिटिक्क परेको नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो । ‘माटोलाई चिनौँ……., जग्गा बाँझो त राख्नै नराखौँ…..युवाले रोजगार पाइहाल्छन्…., विदेश पलायन रोकिन्छ…..इत्यादि । अनि अलिपछि कता हो सुनिएको थियो– ‘फलानो देशले नेपाली कामदार मागेकोमा फलानोद्वारा खुशी व्यक्त….’ । अनि शङ्का गरौँ या विश्वास गरौँ । एउटा दोधार कायमै रहन्छ ।
जे जति कुरा गरे पनि जनताको चाहना एउटै छ : ‘आफ्नै माटोमा काम अनि कामअनुसारको दाम देऊ ।’ ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सक्छौ भने निःशुल्क बनाइदेऊ ।’ जनता त यही क्षेत्रमा ठगिन्छ नि । कृषिका कुरा पनि उठ्छन्, पर्यटन आउँछ तर अहिले अलि जोडतोडका साथ ‘स्वास्थ्य’ को कुरा आएको छ । अनि, ‘डाक्टर’ को भूमिकाले प्रश्रय पायो भनौँ । भूकम्पको समय ताका पनि ‘पुननिर्माण’ का कुराले स्थान पाए अनि ‘इन्जिनियरिङ’ को विचारले ठाउँ पायो । कुरा नीतिको खराबीको हुँदै होइन मात्र व्यावहारिकताको हो । हामी बिचरा जनतालाई यत्ति लामा नीति किन चाहियो र बरु त साना नीति र योजना तर कार्यान्वयन हुने गरी भए जाति हुन्थ्यो ।
के सिक्दै छौँ त ?
कोरोना महामारी र भारतले गरेको नेपाली भूमि अतिक्रमणको नाङ्गो नाचको विषयले स्थान पाइरहेको थियो । त्यसअघि प्रधान्मन्त्रीको अध्यादेशको विषय, सांसद अपहरण र नेकपा गुटको तन्त्रले बजार लिएको थियो । अब भने एक–दुई हप्ता नीति तथा कार्यक्रमले स्थान लिनेछ । दुःखको कुरा– भूकम्पपछि पनि आत्मनिर्भरताको पाठ पढिएन । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि पनि आत्मनिर्भरताको पाठ पढेनौँ । खेतबारी बाँभैm राखेर बासमतीको भुजा ज्यूनार गर्ने चाहना हामीमा छ । गाडी चढ्ने लालसा छ । सुकिलोमुकिलो हुनेकै त इज्जत हुन्छ । “सर” वा “मेडम” भएर “आइस्यो, गइस्यो” सिक्नु छ तर उही ढिँडो खानु पनि छ अनि उही मकैको भात खानु पनि छ । रोगको सिकार भइरहेका छौँ । आराम धेरै, व्यायाम थोरै छ । आधा जीवन कमाउन अनि आधा जीवन स्वास्थ्यमा खर्चिन विवस छ । शरीर कुँजो हुँदै छ । नवपुस्तालाई अङ्ग्रेजी पढाएर विदेशिने बाटो खनाउने आजको होनहार मानिस पनि हामी नै हौँ । हामी त पलायनवादी सोचबाटै सिकिस्त बिरामी छौँ ।
हामी साँच्चै अटेरी, जब्बर पनि त छौँ । प्रकृतिलाई ध्वस्त बनाउँदासम्म, प्रदूषणको थुप्रोले थिच्दासम्म हामी अलिकति सचेत बन्दैनौँ । बाध्यताभन्दा विलासिताको मोहमा हामी साँच्चै अन्धो पनि छौँ । हामीलाई त पुर्खाले पहिल्यै भनेका थिए– हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु । विपत्तिको प्रकृति फरक हो तर धेरै मानव निर्मित र कृत्रिम सङ्कटबाट पनि आत्मनिर्भरतालाई सिकेनौँ । कोरोना महामारीले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई जीर्ण बनाइरहँदा भोकमरीको सिकार हुनेमा हामी पनि पर्न सक्छौँ । तर, यो खेदपूर्ण विषय हो, हामी त कृषिप्रधान मुलुकका नागरिक हौँ नि त ! आखिर हाम्रो मुलुक परनिर्भताको पराकाष्ठा झेल्न बानी परेको छ । पलायनवादी नवपुस्ता आफ्नोलाई बिर्सेर अर्काको सिको गर्न लालायित छ अनि हामी यसैलाई आधुनिक युग र महान् कार्य मान्छौँ ।
महामारीका रूपमा वितण्डा मच्चाइरहेको कोरोनाले हामीलाई मानिसभन्दा प्रकृति नै बलियो हुन्छ भनेर सिकाइरहेको छ । यो विषाणु पनि प्रकतिकै रचना न हो । तर, कसले कसलाई रोग सारिदियो भनेर बहस गर्नुको पनि तुक छैन किनकि कतिको सतर्क रहन्छ भन्ने विषय ठूलो हो । विनाहतियारको एउटा महासङ्ग्राममा जित्नैपर्ने एउटा अनौठो परीक्षा पनि हो ।
चीनले बन्दाबन्दी (लकडाउन) खोलेपछि पुनः बिरामी देखा परेको विषयलाई हेर्दा पनि यो विश्वव्यापी समस्यामा हतारिएर खोलिहाल्नु उपयुक्त देखिँदैन । यद्यपि, अनिवार्य आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु मुलुकको अहिलेको आवश्यकता हो । कमाएको चीजलाई बसेर खानुपर्ने हुँदा मानिसको जीवन दिनदिनै दयनीय बन्दै गएको आभास हुन्छ ।
भूकम्पले घरबाहिर खेदायो, कोरोनाले घरभित्रै कँज्यायो । भूकम्पले भौतिक विकासका लागि इन्जिनियरका लागि अवसर र चुनौती पस्कियो अनि कोरोनाले डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्योपचारको चुनौती र अवसर लिएर आएको छ । अब दिनदिनै कोरोनाको कहरले घरको भकारी रित्तिँदै गर्दा रोगका कारणले भोक र शोकको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । अब कृषक तात्तिने बेला भयो । जमिन खोस्रने उत्तम प्रविधितिर लम्कने बेला आयो । यो प्राकृतिक समस्यासँग जुधेर होइन सचेत भएरैमात्र हामी जोगिने वास्तविकतालाई नीति तथा योजनाले कति स्थान दिन्छ ? त्यो प्रमुख विषय हो ।
खोलाका किनारामा घर बनाएर सधैँ सुरक्षित रहन्छु भनिरहन सकिँदैन । भवितव्य कसैलाई थाहा हुँदैन तर मानिसमा चेतना भएसम्म बाँच्ने र बचाउने प्रयत्न गर्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । आज जग्गा बाँझो छ । हाम्रो जस्तो ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्समा अडेको मुलुकलाई अब भोकमरीको भयावह अवस्थाले नथिच्ला भन्न सकिँदैन । धेरै नेपाली दाजुभाइहरू अब कम्पनी डुबेर र भविष्य नदेखेर या त भयले विदेशबाट स्वदेशमै फर्कनेछन् । आज जो जसले जे जसरी प्रक्षेपण गरेका तथ्याङ्क हेरे पनि हाम्रो मुलुकले अब ग्रामीणीकरण तथा कृषि र पशुपालनको आधारलाई समात्नु आवश्यक छ । हाम्रै नेपालीपनाको पृष्ठाधारलाई खोतलेर आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नेदेखि आपूmले विकास गर्ने कुरामा मुलुकले कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्छ ।
अलिकति त मानवतावादी बनौँ !
वास्तवमा पैसाभन्दा त जीवन नै ठूलो रहेछ किनकि पैसा र यो संसारको पद्धति मान्छेले नै बनाएको न हो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ : “हे तो छिपाओ नही : नही हे तो बिकाओ नही” अर्थात् “छ भने नलुकाउ र यदि छैन भने आफैँलाई नबेच” । हातमा महङ्गो मोबाइल र घाँटीमा सिक्री भिर्ने पनि राहत दिनुको साटो लिनका लागि लाज मान्दैनौँ । यसो भनिरहँदा घर हुनेले इट्टा निकालेर खान पनि त मिल्दैन । तर, भूकम्पकै जसरी राहतमा भ्रष्टाचारका गन्ध आइरहेका छन् । लालचीपनाको दलदलले हामीलाई यत्रा भयङ्कर महामारीमा पनि मानवताको पाठ पढाउन सकेन ।
संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वानुमान र आँकडालाई हेर्दा विश्वमा खाद्य सङ्कट हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आजको हाम्रो पुस्ता नितान्त चुबुर्के भएको छ । बिहानलाई बिहानै किनेर खाने, बेलुकालाई बेलुकै खाने । हाम्रा पुर्खाले हामीलाई एउटा कन्तुरमा पैसा जोहो गर्न भन्थे । हर्पेमा घिउ राखिरहन सिकाउँथे । कुनातिर माटाको गाग्रोमा चामल राख्न भन्थे । अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्ने हेतु नै मुठीदानको थिति थियो । आत्मनिर्भरताका बारेमा नबुझ्ने मान्छेले मात्रै वास्तवमा नवसामन्तको मायावी सोचलाई ओढेर हिँड्छ । आजको पुस्ता त जोहो गर्नेलाई पनि पो शोसक भन्दो रहेछ ।
अरूको खोसेर खाने र अरूलाई अघि बढ्न नदिने मात्रै शोषक हुन्छ । जो कमाउँछ, सक्छ, जोगाउँदैन अनि उडाउँछ त्यसपछि ऊ गरिब हुन्छ । उसमा बचतको ज्ञान छैन भने अरूलाई दोष दिनु कदापि जायज हुँदैन । आफ्नो कमजोरी पटक्कै स्वीकार नगर्ने र नसुध्रने तर आरोप चाहिँ लगाइरहने हो भने पनि हामी आर्थिक असमानताको सिकार भइरहनेछौँ । पढ्ने र कमाउने उमेरमा जङ्गलमा लोखर्के खेद्न जाने, दुःख नगर्ने, कमाइहाले पनि भट्टितिर पसेर बेलुका घरमा उल्टै ऋण बोक्दै फर्कने सोच र व्यवहारलाई हामीले बदल्नुपर्छ । जबसम्म हामी जनताले सिर्जनशीलताका बारेमा सोच्दैनौँ तबसम्म सामाजिक रूपान्तरणको सम्भव हुँदैन । यसर्थ मिहिनेत र आफ्नो माटो खोस्रने व्यावहारिकतासँग अब बचतको अभ्यास आवश्यक छ ।
हरेक नेपालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या : शिक्षा र स्वास्थ्यमा हो । सहज समयमा गरिब, सर्वसाधारण केही नभनी घरखेत सारा उडाउने गरी चर्को रकम असुलेर उपचार गर्न बजार थापेका निजी अस्पतालहरू कोरोनाको परीक्षण नगर्ने भन्दै निर्लज्ज रूपमा तर्किनेका लागि पनि हो । कपडा पसलमा सामानको भाउ घटाउन मिल्छ, गाडीमा गाडी भाडामा छुट हुन्छ, सब्जी किन्दा पनि हामी अलिकति घटाइ माग्छौँ तर अस्पताल नै यस्तो क्षेत्र हो जहाँ एक पैसा कम तिर्न मिल्दैन । बिरामीवालालाई औषधी, उपचारका बारेमा केही ज्ञान नहुँदा जे भने पनि, जसो भने पनि, जति मागे पनि तिर्नै पर्ने हाम्रो बाध्यता छ । त्यसैले जीवनभरि कमाएर पैसा खर्च गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो र अप्ठ्यारो स्थान भनेकै अस्पताल बनिदिन्छ । अझ बेड खाली छ भने अस्पताल बस्नुपर्ने दिन लम्ब्याएर समेत बिरामीलाई राखिदिएका हुने रहेछन् । हामीलाई विश्वास गर्नु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन किनकि त्यहाँ जीवन–मरणको सवाल जोडिएको हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा त त्यसै पनि लापरबाही गर्ने र बिरामीलाई बेवास्ता गर्ने, सफा–सुग्घर नगरिने, आफन्तवाद गरिने लगायतका असंवेदनाको देखादेखी व्यवहार भइरहेकै हुन् । सरकारी अस्पतालमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा त डाक्टरसाबको बोली सुन्न पाउनु नै हो । तिनले निजीमा धेरै पैसा पाइने भएर पनि बिरामीलाई वास्ता नगरेका कुरा नयाँ होइनन् । अतः यी संवेदनाका विविध पक्षमा सरकार गम्भीर होओस् ।
हामी यो महामारीको सङ्कटका लागि मात्र होइन कैयौँ अन्य सङ्कटमै पनि आगो लागेपछि कुवा खन्ने संस्कारमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ । वर्गीय विभेदलाई त आजको पुस्ताले, नेतृत्वले झनै नराम्ररी खाडलभित्र हाल्दै छ । सम्पन्न मान्छे ठूला संघ–संस्थामा काम गर्छन्, ठूलै कलेजमा पढ्छन्, ठूला सम्पर्कमा हुन्छन्, ठूलै मान्छे बन्छन् किनकि हुनेले त लगानी गर्न सक्छ । नहुने विचराले भाग्य भरोसा डोकोमा दूध दुहेर अड्याउन त सक्दैन । देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै छ । मुलुकले भूकम्प, नाकाबन्दी, डुबान, पहिरो आदिबाट पनि आत्मनिर्भरताका सुनौला सपना तुन्दै तुहाउँदै आएको छ । हाम्रो पुस्ता नै बसिखाने र गफिइखाने भइसकेको छ । पढालेखा माटोमा खेल्दैनन्, अन्य युवा पुस्ता विदेशिएका छन् । ती पनि सहरै ताक्छन् । यसर्थ यो यथार्थताको धरातलमा अब नेपालले कृषि र युवा विकासको नवीन योजनाको द्रुत मार्ग खोज्नु आवश्यक छ ।
सायद इन्टरनेट नै अधिकांश मानिसको एकान्तवासको प्रिय साथी हो । पारिवारिक ममताका साथमा रहेर बाँच्न सिकौँ । बालबच्चासँग रमाऔँ र केही सिकाऔँ । प्रविधिले मान्छेलाई जन्माएको होइन, मान्छेले प्रविधिलाई जन्माएको हो । हामी अचम्मका छौँ– अस्तिसम्म फुर्सद भएन भन्दै रोइकराइ गथ्र्यौँ, आफन्त–परिवारसँग टाढिएका थियौँ तर अहिले फुर्सद धेरै भयो भन्दै छौँ । हामीलाई व्यवस्तता चाहिएको हो कि फुर्सद ? यो समयमा सिर्जनशील बन्ने, रचनात्मक काम गर्ने अवसर हो । सदुपयोग गरौँ ।
भारतद्वारा ३० हजार पिसिआर किट हस्तान्तरण